Van Dijk oo balan qaad u sameeyay taageerayaasha kaddib markii Liverpool ay gaartay finalka Carabao Cup – Gool FM
(London) 21 Jan 2022. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa balan qaad u sameeyay jamaahiirta Reds, kadib markii Reds ay ay gaartay finalka Carabao Cup.
Liverpool ayaa balan kaga sameystay Chelsea finalka koobka Carabao Cup kaddib markii ay guul kaga gaartay kooxda Arsenal 0-2, kulankii lugta labaad wareegga afar-dhammaadka ee tartankan.
Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa ciyaarta kaddib u sheegay shabakada caalamiga ah ee BBC-da:
“Ma dareemayo inuu ahaa hadal, laakiin waxa uu ahaa qaab ciyaareed fiican, waxaana muujinay midaas xilli ciyaareedka oo dhan.”
“Liverpool wax walba oo ay awoodo ayeey ku soo bandhigi doontaa finalka Carabao Cup oo ay kula ciyaarayaan Chelsea.”
“Waan ka gudubnay duufaanta, gaar ahaan taageerayaasha Arsenal, gabi ahaanba waan u qalannaa inaan aadno Wembley.”
“Diogo Jota waa ciyaaryahan aad u fiican, rikoorada iyaga ayaa iska hadlaya, aad ayuu muhiim u yahay, wuxuu sidaasi muujiyay sanadkii hore, way adag tahay inaad kahor timaado, waxaana taasi ku ogaaday tababarka.”
Virgil van Dijk ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Xaqiiqdii waxaan rajeynayaa fursad aan ugu heli karo koobka garoonka Wembley, waxaana ku siin doonaa wax walba oo aan heysano marka aan joogno halkaas.”
“Waxaa jira kulammo badan oo aan ciyaari doono kahor ciyaarta finalka, diirada ayaana saari doonaa.”